अनिल शाह भन्छन्- पृथ्वीनारायणलाई राजाको रूपमा हेर्न मिल्दैन, यो सोचले नेपाली भन्न लाज लाग्छ - Dainik Nepal
अनिल शाह भन्छन्- पृथ्वीनारायणलाई राजाको रूपमा हेर्न मिल्दैन, यो सोचले नेपाली भन्न लाज लाग्छ
दैनिक नेपाल २०७३ पुष २८ गते १२:०५
देशमा गणतन्त्र आउनुअघि आधुनिक नेपाल निर्माण तथा देश एकीकरणका प्रणेता पृथ्वीनारायण शाहको हरेक वर्ष पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइन्थ्यो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि केही राजतन्त्र पक्षधर दलहरु बाहेक पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस मनाउनुपर्छ भन्ने माग उठ्न सकेको थिएन । पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस मनाउनपर्छ भन्ने युवा पुस्ताकै जोडदार माग थियो । तर, सरकारले जनताको मागलाई सुन्न सकेन । यसै विषयमा दैनिक नेपालले मेगा बैंकका सिइओ तथा युवा बैंकर अनिल शाहसंग कुराकानी गरेको छः
पृथ्वीनारायणको जन्म दिवस नै देशको जन्म दिवस
आज मलाई नेपाली हुँ भनेर भन्न पाएकोमा सबैभन्दा बढी गर्व लाग्छ । मैले नेपाली हुँ भनेर भन्न पाउने अधिकार मलाई पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको छ । उहाँले विभिन्न टुक्रामा विभाजन भएको देशलाई एकीकरणमार्फत आधुनिक नेपालको निर्माण गरेर नै हामीलाई नेपाली भन्ने वातावरण मिलाउनुभयो । उहाँले यस्तो नगरेको भए हामी अर्को देशमा गाभिसकेका हुन्थ्यौं होला ।
त्यसैले हामीले उहाँको योगदानलाई कदापी बिर्सनु हुन्न । उहाँको जन्मजयन्तीका अवसरमा यसअघि मनाइने राष्ट्रिय एकता दिवसलाई मनाउनुपर्छ । यो दिवस मनाउनु नै देशको जन्म दिवस मनाउनु सरह मानिन्छ । मलाई सरकारले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस नमनाएकोमा दुःख लागेको छ ।
राष्ट्र निर्माता र राजा फरक हुन्
आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीबहादुर शाहलाई हामीले राजाको दर्जामा मात्रै हेरेर गणतन्त्र स्थापनापछि उहाँलाई बिर्सनु लाजमर्दो कुरा हो । जसरी विपी कोइराला काँग्रेसको नेता भन्ने कि राष्ट्रको नेता भन्ने ? त्यस्तै, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी लगायतलाई पनि कुनै पार्टीको मात्रै नेता भनेर न्याय गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी एउटा देश निर्माणका प्रणेतालाई राजाको नजरमा मात्रै हेर्न मिल्दैन । यो सोचले हामी नेपाली भन्नुमा लाज मान्नुपर्छ ।
के मैले पनि ठकुरी, स्याङ्जाली भिरकोटे भन्ने सुहाउला त ? त्यसले कुनै मानिसको योगदानलाई विर्सिनु हुँदैन । पृथ्वीको योगदानलाई हामीले बिर्सिने हो भने हामीले गरेका कामलाई पनि हाम्रो आउने पुस्ताले अवश्य बिर्सिन्छ । हामीले हाम्रो बच्चालाई जे सिकायो बच्चाले पनि त्यही सिक्ने हो ।
म त यो भन्छु कि जसले नेपालको लागि केही गरेको छ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । यो गरेमा हामी ठूलो राष्ट्र बन्छौं, त्यही राष्ट्रका नेता र जनता बन्छौं । होइन भने हाम्रो सोच सानो, देश सानो र नेता साना हुन्छौं । यो दिवसलाई राजनीति र राजाबादीसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । यो नितान्त फरक कुरा हो ।
देश नरहने चिन्ताले पृथ्वीनारायणलाई सम्झें
अहिले जनतालाई के सम्म डर भइसक्यो कि अब देश रहने हो कि होइन । नेपाल भन्ने चिज भन्ने रहनुपर्यो भन्ने सारा नेपालीले चाहिरहेका छन् । गणतन्त्रपछि देश संघीयताका गएको छ ।
तर, विभिन्न ठाउँमा अधिकारका नाममा आन्दोलन भइरहेका छन् । यद्यपी संविधान आएको छ । तर, कार्यान्वयनमा समस्या देखिइरहेको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समयमा नेपाली जनता त्यसमा पनि युवा पुस्तालाई देशप्रति चिन्ता जागेको छ । यसले देश निर्माता पृथ्वीनारायणलाई सम्झिन चाहेका छन् । उहाँको जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसमार्फत उहाँको योगदानलाई सम्झिन चाहिरेका छन् । जनतालाई अब राष्ट्रियताप्रति चिन्ता जागेको छ ।
पृथ्वी जयन्ती नभने पनि एकता दिवस मनाइयोस्
सरकारले यस वर्ष पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस नमनाएपनि अर्को वर्ष भने मनाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । केही प्रतिशत मात्रै क्रिश्चियन भएको हाम्रो देशमा सरकारले उनीहरुको चाडमा सार्वजनिक विदा दिन सक्यो तर, सारा जनताले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने माग गरेपनि सुनुवाई भएन । क्यालेण्डरमा पनि पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस उल्लेख गरिएको थिएन । तर, त्यस्तै, क्यालेण्डरमै उल्लख नभएको क्रिश्चियनको चाडमा भने सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको थियो ।
क्रिश्चियन भन्दा त कैया गुणा बढी जनताले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आवाज उठाएपनि सरकारले यो मागलाई नसुन्नु दुखद् हो । सरकारले यस वर्ष राष्ट्र निर्माण तथा देश एकीकरणका प्रणयता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन नसकेपनि अर्को वर्षमा पनि क्यालेण्डरमै राखेर दिवस मनाउनुपर्छ । मलाई लाग्छ बरु सरकारले पृथ्वी जयन्ती नै नभेर पनि राष्ट्रिय एकता दिवस भने आगामी वर्षमा मनाओस् ।
प्रस्तुति: अंकुश कुँवर / दैनिक नेपाल
हराउँदै गएको हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रियता